Katapila Injector valvụ
Ndị ahịa Russia na-eleta ụlọ ọrụ anyị
site na nhazi na 20-06-04
2019.10.25th onye ahia a bia na ebe anyi no, o ju anyi nke oma. Maka akụrụngwa anyị bụ ama ama ama zuru ụwa niile, ọzọ bụ mbipụta kachasị ọhụrụ. N'ụzọ dị otu a, anyị nwere ike ijide n'aka na nrụpụta izizi anyị. Ọ bụghị naanị na nwere n'elu mma, t ...
Bahmueller maka nozzles na injector valvụ nkọwapụta 1
Specific components na usoro atụmatụ Nke a na-enye anyị ohere inweta: NOZZLE NEEDLE (SEAT & MATCH GRINDING) CBN egweri wheel wheel ugboro <15s 2 dayameta in-process mmesiri isi straightness <0.3µm piezo tailstock ndu dayameta ike ọjọọ Ra <0.06µm pre-measurem. ..
Bahmueller maka nozzles na injector valve nkọwapụta 2
site na nhazi na 19-06-04
NOZZLE BODY INTERNAL GRINDING 2 station Twinner machine (2 na-egweri otu okirikiri igwe) ọkara nke oge okirikiri na ntinye ego na-abawanye nha elele na 4 ọkwa maka nha na dayameta emezi ya na sistemụ <1ptivem ada ihe na-egweri = osc ...